China Fireproof Decoration ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ACP စာရွက် Aluminum Composite Panel နှင့် Wood Grain ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံနှင့်အတူ။ | Alutile
သစ်သားနှင့်အတူမီးသတ်အလှဆင်အဆောက်အအုံ ACP စာရွက် Aluminum Composite Panel ကို
Nanchang, Jiangxi ပြည်နယ်, တရုတ်။
ထုတ်လုပ်မှုနိဒါန်းလူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ထားသော panel ကိုအလူမီနီယံစာရွက်၏အပေါ်အောက်နှင့်အောက်ပိုင်းအလွှာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးကိုအထူးမုန့်ဖုတ်ဆေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။အထူးပစ္စည်းလျှောက်လွှာနှစ်ဖက်ထောင့်ချိုးဖုတ်ဆေးနှင့်အတူနောက်ဘက်စာရွက်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်ရှင်းပြီးမျက်နှာပြင်ဖြင့်သန့်စင်လိုက်သည်။ နောက်ဘက်အဖုံးသည်လည်းအမာရွတ်ပြင်းထန်သည်။ ဤသည်သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရေးကြီးသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်
အလူမီနီယံပေါင်းစပ် panel ၏အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းကိုအကောင်းဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိပြီး၎င်း၏အညီအမျှနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုတိုးတက်စေသောနည်းပညာ - အခွံခွန်အားအသစ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။PVDF သည် hylar5000 သို့မဟုတ် kynar500 ကို အခြေခံ၍ ချေးခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်းတို့တွင်ထူးခြားသောအားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်အပူရှိန်နေရောင်ခြည်တွင်သို့မဟုတ်လေအေးနှင့်ဆီးနှင်းတို့တွင်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှမပျက်စီးစေနိုင်ပါ။၂ ။ ပေါ့ပါးပြီးလုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်အလူမီနီယမ်ပေါင်းစပ် apenl သည်၎င်း၏အလေးချိန် ၃.၅ မှ ၅.၆ ကီလိုဂရမ်ရှိငလျင်လှုပ်ချိန်အတွင်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၄ င်း၏ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စီမံခြင်း၊ arc မှကွေးခြင်းနှင့်ထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းများကိုရိုးရှင်းသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ။ ဒီဇိုင်နာများလည်း panel ထဲမှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။3. Coating ကိုညီမျှခြင်း, မျိုးစုံအရောင်များChemosynthesis ဆေးကုသမှုနှင့် Henkel နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကတည်းကဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် panel အကြားကော်များသည်အရောင်မျိုးစုံရှိသည့်အတွက်ညီမျှသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အတူအရောင်မှသင်၏ရွေးချယ်မှုများအတွက်နေရာပိုရှိပါတယ်။
အလွန်သန့်ရှင်းသောညစ်ညမ်းမှုများရှိသည့်နေရာများ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်၎င်းကိုကြားနေဆပ်ပြာဖြင့်သာသန့်ရှင်းနိုင်ပြီးသန့်ရှင်းပြီးသည့်နောက်တွင် panel သည်အသစ်ဖြစ်နေလိမ့်မည်။5. သက်ရောက်မှုခုခံ
သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့်မာကျောမှုသည်ခိုင်မာသည်။ ကွေးသောအခါဖုံးအုပ်ထားသောအလွှာသည်မပျက်စီးနိုင်ပါ။ ပြင်းထန်သောလေထန်သောသဲအခြေအနေတွင်ရှိသည့် panel ကိုပျက်စီးခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ -မျက်နှာပြင်ကုသမှုHenkel Co. , ဂျာမနီမှအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆေးသုတ်ပစ္စည်းများ:PPG, BeckerHigh- မော်လီကျူးရုပ်ရှင်:အမေရိကန် Dupont ကုမ္ပဏီအကာအကွယ်ရုပ်ရှင်:ပြင်သစ် Novacel Compamy၊ ဂျာမနီ Polifilm ကုမ္ပဏီအဖုံး PVDF, Polyester, စက် finish ကိုလူမီနီယမ်ကွိုင်:3003 လူမီနီယံအလွိုင်း, 5005 aaluminum lloyအာမခံချက် -PVDF အတွက်နှစ် ၂၀၊ Polyester အတွက် ၁၅ နှစ်လျှောက်လွှာနယ်ပယ်: အပြင်ပန်းနံရံအလှဆင်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းနံရံအလှဆင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊လက်မှတ်: CE, ISO9001, SGS, Intertek, CTC စသည်။လျှောက်လွှာနယ်ပယ်၁) အပြင်ပန်းကုလားကာနံရံများတည်ဆောက်ခြင်း (၂) အတွင်းနံရံ၊ မျက်နှာကြက်၊ ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့်လသာဆောင်များကိုအလှဆင်ခြင်း ၃) ဆိုင်တံခါး၏အလှဆင်ခြင်း4) အဆောက်အအုံဟောင်းများအတွက်အလှဆင်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းစတိုးဆိုင် - ၅ ။ ကြော်ငြာဘုတ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်လှေပစ္စည်းများ။
ရှေ့သို့ အပြင်ဘက် PVDF Coating Building Materials Fireproof Aluminum Curtain Wall Solid Panels
နောက်တစ်ခု: China Body Building CAS 899821-23-9 ACP-105 အတွက်စက်ရုံစျေးနှုန်း
သစ်သားမီးဒဏ်ခံ Aluminum Composite Panel အတွက် ...
၀.၃ / ၀၃ မီလီမီတာဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများမီးဘေးဒဏ်ခံနိုင်သော B1 ...
၀.၄ / ၀၄ မီလီမီတာဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများမီးဘေးဒဏ်ခံ B1 ...
နှစ်ဖက်စလုံး PVDF Coating Marble Colour Fireproof ...
မီးဘေးဒဏ်ခံ ACP ဆောက်လုပ်ရေးမျက်နှာစာအကာ ...
မီးဘေးကာကွယ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ACP Shee ...